Ilma Kee Arguuf Hawwite Utuu Hin Argin Hafte: Abbaa Warraa Haati Manaa Isaanii COVID-19 Qabee Duraa Duute
Ebla 29, 2020
Sirni awwaalcha aadde Wegenee Debelee b abba warraa isaanii gaddaan caban obbo Yilmaa Asfaaw fi intall isaanii hangafaa kan umuriin wagga 17 Mihiret Yilmaa fi namoonni muraasine bakka argamanitti kutaa VAtti kan argamu bakka awwaalchaatti kan raawwatame turban darbe keessa ture.
Sababaa vaayiresii koronaaf jecha wali irraa hiiqiinsi namootaa waan tureef namni itti dhiyaatee obbo Yilmaa jajjabeessu hin turre. Aadde Wegeneen ennaa mallattooon COVID 19 ulfaa ji’a saddeetii turan.
Caamsaa 21 mucaa da’anii sa’aatii hanga tokko booda lubbuun isaanii biyya lafaa kana irraa godaane. Mucaan dhalate dhibee kana irraa walaba ta’ee jira. Intalli isaanii Mihiret Yilmaa haadha koo dhabuun waan obsamu miti jetti.
Nama tokko qofan dhabe miti. Sadiin dhabe. Haadha koon dhabe. Obboleettii fi hiriyaa koon dhabe. Baay’ee walitti siqnna. Utuu nagaa natti hin dhaamin nu dhiistee deemte. Cimnaa fi amantii qabaachuun maal akka ta’e na barsiisteetti. Kan nuti nagaa taaneef sababaa iseen halkanii guyyaa Waaqayyoon nuuf kadhattuufi jette.
Paartiin Bulchiinsa Nannoo Tigraay Bulchu Guyyaa Bordiin Filannoo Kennee Ture Sanatti Filannoo Gaggeessuuf ka jiru ta'u Beeksisee
Miseensonni Mana Maree Bakka Bu'ootaa Torban Dhufu Diisiitti Hin Deebinu Jedhan
Dhukkubii Kooviid Dhibbaa Inni Ijoollee Irraan Ga'e Guddaadha: HRW
Geejibii Balalii Xayyaaraa Awuroopaa Rakkootu Na Mudate Jedha
Mootummaan Dr.Abiyyi Ahmad Baatii Fulbaana Dhufuu Qabee Attamiin Itiyoophiyaa Bulchuu Danda'aa? Mariitu Gaggeeffame